Monday, February 18th, 2019 - 19:03:20
Wednesday July 11, 2018 - 11:35:21 in Wararka by Hussein Hadafow
Maxaa ugu wacan in malaayiin qof ay sidan ugu arkaan Koobka Adduunka
Image caption Ciyaartii Ruushka iyo Sucuudiga iyo sida sawirka ula muuqanayo dadka la' midabka aragga.
12 qof oo rag ahba, midkood ayaa qaba xanuunkan midab la'aanta aragga, dumarka 200 dumar ahba mid ka mid ah ayaa qabta.
Midab la'aanta aragga waa ay kala duwantahay, waana kala darantahay , qofka aadka u darana waxa ciyaartii Ruushka iyo Sucuudiga ula muuqan kartaa sawirka hoose, oo lala barbar dhigay sawirka rasmiga ah.
Image captionSawirka u muuqanaya dadka la' midabka aragga
Marka ciyaarta ay noqoto rigooro ama gool-ku-laad, dadka la' midabka aragga waxa ay ku dhibtoodaan in ay kala sheegaan middabada guduudka iyo cagaarka ee kasoo muuqda shaashadaha ee lagu tirakoobayo goolaha la kala dhaliyay iyo kuwa lala gafay.
Katy Moran, 27 jir ah waxa ay u dheeshaa kooxda gabdhaha ee Aston Villa, waxa ay BBC-da u sheegtay in ma
rarka qaarkood ay ciyaartooyga kale ka eegto iskaalsooyinka (sharabaatooyinka) si ay u garato kooxda uu yahay, gaar ahaan marka ay iyada ciyaaraha dheeleyso.
Image captionThomas Delaney (safka hore, qofka koowaad dhanka midig xigga) ayaa ka mid ah ciyaartooyda la' midabka aragga
Delaney ayaa raadiye ku yaala dalka Denmark u sheegay in uu la'yahay midabka aragga, isaga oo taageero u muujiyay qof taageere ah oo soo wacay raadiyaha, xanuunkaaska qaba.
Balse dadka qaar ayaa la' qeyb ka mid ah saddexdaas maaddo, mararka qaarkoodna dhammaantood ayaaba qofka ka maqan.